‘गोर्खा कल्चरल नाइट’का लागि लन्डन पुगे नेपाली कलाकार
काठमाडौं, साउन १२ । ब्रिटिश गोर्खा नेपाली परिषदले आयोजना गर्न लागेको ‘गोर्खा कल्चरल नाइट–२’ को लागि चर्चित कलाकारहरु बेलायत पुगेका छन् ।
भर्खरै एसएलसी पास गरेकी श्रीषा पल शाहसँग रोमान्समा (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौं । मान्छेले आफ्नो प्रतिभा जन्मेदेखि नै देखाउन थाल्छ । बाल्यकालदेखि नै गीत गाउन रुची देखाउने श्रीषा कुँवरले यसैवर्ष एसएलसी पास गरेपछि थप सक्रियता देखाएकी छिन् ।
‘संजोग’लाई पिजी सर्टिफिकेट, सुष्मा र सविनको रोमान्स पर्दामा
काठमाडौं । ‘संजोग’ लाई चलचित्र सेन्सर बोर्डले ‘पिजी’ सर्टिफिकेट दिएको छ । चलचित्रमा भरपूर्ण एक्शन भएकाले सेन्सरले ‘पिजी’ सर्टिफिकेट दिएको यसका निर्माता उमेश उप्रेतीले बताए ।
अर्चना पनेरुका दुइवटै फिल्म फ्लप, तनावमा निर्देशक
काठमाडौं, साउन ९ । ‘पोर्न स्टार’ बन्ने लक्ष्य लिएकी अर्चना पनेरु अभिनीत दुवै फिल्म फ्लप भएका छन् ।
‘रेलिमाई’ले साउन २१ देखि पेट मिचिमिच हसाउँने
काठमाडौं, साउन ६ । चलचित्र रेलिमाई यही साउन २१ गतेबाट देशभर प्रर्दशनमा आउने भएको छ ।
‘सुल्तान’ले कमायो ५०० करोड भारु, रेकर्ड तोड्ला ?
काठमाडौं, साउन ४ । बलिउड सुपरस्टार सलमान खान अभिनित फिल्म ‘सुल्तान’ले अहिलेसम्म ५०० करोड भारु आम्दानी गरेको छ । ईदको अवसरमा जुलाई ६ तारिखबाट प्रदर्शनमा आएको सुल्तानले प्रदर्शनको १२औं दिनसम्ममा विश्वभरबाट ५०० करोड भारु कमाएको हो ।
एकै दृश्य खिचेर दुई चलचित्र, ‘वर्ल्ड रेकर्ड’मा दर्ता गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, साउन ३ । एउटै दृश्य (वान सट)मा खिचिएका दुई नेपाली चलचित्र ‘जालो’ र ‘जालो रिटन्र्स’ एकैसाथ तयार हुने भएका छन् । विश्वमै पहिलोपटक यो किसिमले चलचित्र बन्न लागेको हुनाले यस कार्यलाई ‘गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड’मा दर्ता गर्न लागिएको सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
राम बहादुर बाँडेका तीन एल्बम एकसाथ रिलिज
काठमाडौं, साउन ३ । गायक, संगीतकार तथा रचनाकार राम बहादुर बाडेका तीन म्यूजिक एल्बम एकसाथ रिलीज गरिएको छ । आइतवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नयाँ शक्ति नेपालका नेता देवेन्द्र पौडेलको प्रमूख आतिथ्यतामा एल्बम सार्वजनिक गरिएको हो ।
अरनिकोको जीवनीमा आधारित नाटक मञ्चन
बनेपा, साउन २ । काभ्रेको बनेपामा आइतबार एक कार्यक्रमबीच राष्ट्रिय विभुति अरनिकोको जीवनमा आधारित नाटक मञ्चन गरिएको छ ।
पाकिस्तानी मोडल कन्दील बलोचको हत्या
काठमाडौं, साउन १ । पाकिस्तानी मोडल कन्दील बलोचको गोली हानेर गरिएको छ । पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तका प्रहरी प्रवक्ता नबीला गन्जफरले उनको मृत्युको पुष्टि गरेका छन् ।
यी हुन् ०७१ र ०७२ को छिन्नलता गीत पुरस्कार पाउनेहरु
काठमाडौं, असार ३१ । गीतकार श्रवण मुकारुङ, गायक किरण प्रधान र संगीतकार आलोक श्री छिन्नलता गीत पुुुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन् । छिन्नलता गीत पुरस्कार गुठीले शुक्रबार काठमाडौंमा कार्यक्रम गरी वि.सं. २०७१ का लागि गीत रचनामा मुकारुङ, गायनमा प्रधान र संगीतमा आलोक श्रीलाई पुरस्कृत गरेको हो ।